GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee saaka aan ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in wariyaal ay ku jiraan dadkii habeenkii xalay ahayd ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Qaraxani oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasao ah ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka Hotel Xamdi, waxaana ku dhaawacmay ilaa 9 qof oo mid kamid ahi uu yahay askari ka tirsan ciidamada amaanka Puntland.
Dadka dhaawacmay oo isugu jira ganacsato, dhalinyaro, arday iyo wariyaal ayaa waxaa kamid ah wariye Xuseen Xasan Cadde oo kamid ah wariyaasha ka hawlgala Buuhoodle, hasa yeeshee dhaawac hore oo kasoo gaadhay labadiisa lugood xaalad caafimaad darteed loo geeyey magaalada Boosaaso.
Wariye Cadde ayaa la sheegay in uu ka jabay lug sidoo kalena dhaawac uu soo gaadhay, waxaana dadka ku dhaawacmay qaraxii xalay oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidato lagu kala hayaa cisbitaalada kala ah Kaafi iyo Cisbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso si xaaladooda caafimaad wax looga qabto.
Laamaha amaanka Puntland weli kama aysan hadlin qaraxii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso mana jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxaasi oo saamayntiisa la wada dareemay.